Xafiiska ururka kubadda cagta Koonfur Galbeed oo maanta xarigga laga jaray… + SAWIRRO – Gool FM
(Baydhabo) 08 Abriil 2019. Waxaa saakay xarigga looga jaray Magaalada Baydhabo xafiiska ururka kubadda cagta ee Maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaa xafiiskan waxaa xariga si wada jir ah uga jaray Cali Maxamed Cali (Cali Dhuux) oo ah wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga ee maamulka Koonfur galbeed iyo guddoomiye ku xigeen xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Cabdi Maxamed (Cali Shiine).
Munaasabadda waxaa sidoo kale goobjoog ahaa xubno ka socda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, maamulka xiriirka Kubadda cagta Koonfur galbeed, xubno ka socday wasaaradda dhalinyada ee maamulka Koonfur galbeed iyo marti sharaf kale.
Xafiiskan maanta xariga laga jaray waxaa qalabeeyey Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, ku simaha guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Shiine ayaana halkaas ka jeediyey hadallo ballan qaadyo u badnaa.
Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga maamulka Koonfur Galbeed Cali Maxamed Cali (Cali Dhuux) waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in ururka kubadda cagta Koonfur galbeed maanta uu yeesho xafiis uu ku shaqeeyo oo aad u qalabaysan.
“Ugu horreyn waxaan halkaan ku soo dhaweynayaa wafdiga ka socda xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, waxaana ka codsanayaa inay si dhow noogala shaqeeyaan howlaha hormarineed ee isboortiga Koonfur Galbeed” ayuu yiri Wasiir dhalliyada iyo ciyaaraha ee Koonfur Galbeed.
“Waxaan ballan qaadayaa in wixii ururka kubadda cagta Koonfur galbeed uu inooga baahdo ka wasaarad ahaan inaan gacan ka geysan doonno, waana ku faraxsanahay in ururka kubadda cagta koonfur galbeed uu maanta yeesho xafiis aad u qalabaysan oo uu ku shaqeeyo.” ayuu hadalkiisa ku daray wasiirku.
Dhinaca kale guddoomiye ku xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ahna ku simaha guddoomiyaha Cali Cabdi Maxamed (Cali Shiine) ayaa ballan qaaday in wixii uu xafiiskan u baahan yahay oo ay fulin doonaan, isla markaana ay tababaro u qaban doonaan ururka kubadda cagta maamulka Koonfur Galbeed.
“Waxaan ballan qaadayaa in wixii agab iyo macluumaad kale ah oo uu u baahdo xafiiskan uu ku shaqeyn doono ururka kubadda cagta Koonfur galbeed inaan ka xiriir ahaan gacan ka geysan doonno.” ayuu yiri guddoomiye ku xigeen xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Shiine.
Waxaana uu hadalkiisa intaa ku daray: “Anigoo ku hadlaya magaca xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, waxaan sidoo kale idiin sheegayaa inaan tababaro u qaban doonno dhowaan, maamulka, macallimiinta iyo garsoorka hoos yimaada ururka kubadda cagta ee Koonfur Galbeed.”
Guddoomiye ku xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ahna ku simaha guddoomiyaha Cali Cabdi Maxamed (Cali Shiine) waxaa wehliya safarkiisa uu ku joogo magaalada Baydhabo Abuukar Islow Xasan oo ah guddoomiye ku xigeenka horumarinta gobollada ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta.
Xafiiskan maanta xariga laga jaray ee uu ku shaqeyn doono ururka kubadda cagta ee maamulka Koonfur galbeed ayaa lagu qaban doonaa wax waliba oo ku saabsan horumarinta kubadda cagta guud ahaan kubadda cagta Maamulka Koonfur galbeed.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa u taagan sidii uu u horumarin lahaa kubadda cagta gobollada, waxaana Cali Shiine oo ah guddoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya uu sheegay in tartammada soo aaddan oo uu qabanayo ururka kubadda cagta Koonfur Galbeed ay ka xiriir ahaan gacan weyn ka geysan doonaan.
Waa markii saddexaad oo wafdi ka socda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya uu tago Koonfur galbeed muddo labo bilood gudahood ah taasoo qeyb ka ah horumarinta uu xiriirku ku doonayo sidii uu ugu horumarin lahaa guud ahaan ciyaaraha kubadda cagta ee gobollada dalka oo dhan.